Fisondrotan'ny sakafo mahavelona ao an-trano - Banky Sakafo any Galveston County
Ny olona manana fahasembanana sy ny zokiolona no vahoaka mora tohina indrindra eto amintsika. Ny programa momba ny Homebound Nutritional Outreach ao amin'ny Bankin'ny Sakafo any Galveston dia manampy ireo olona miatrika tsy fahatokisana sakafo ary voafetra any an-tranony noho ny fahasembanana na olana ara-pahasalamana. Ny fandaharan'asanay amin'ny fandefasana entana any an-trano dia mitondra sakafo ilaina be dia be ho an'ireto olona ireto raha tsy nandeha izy ireo.
Inona avy ireo fepetra takiana?
Ny olona dia tokony ho 60 taona no ho miakatra na sembana, mahafeno ny torolàlana momba ny fidiram-bola TEFAP, mipetraka ao amin'ny Galveston County, tsy afaka miditra amin'ny pantry na toerana finday hahazoana sakafo.
Impiry no mahazo sakafo ny olona iray mahafeno fepetra?
Atolotra indray mandeha isam-bolana ilay boaty sakafo.
Ahoana no hahatongavako ho mpilatsaka an-tsitrapo amin'ity programa ity?
Mifandraisa amin'i Kelly Boyer amin'ny alàlan'ny mailaka kelly@galvestoncountyfoodbank.org na amin'ny alàlan'ny telefaona 409-945-4232 hahazoana ny fonosana mpilatsaka an-tsitrapo homebound.
Inona no ao anatin'ilay boaty sakafo?
Ny boaty tsirairay dia misy sakafo tsy mety simba 25 kilao toy ny vary maina, paty maina, legioma am-bifotsy, voankazo am-bifotsy, lasopy na lasopy am-bifotsy, oatmeal, serealy, ronono azo anaovana talantalana, ranom-boaloboka azo avy amin'ny talantalana.
Iza no manome ireo boaty sakafo?
Ny boaty sakafo dia atolotry ny mpilatsaka an-tsitrapo ho an'ny olona mendrika. Ny mpilatsaka an-tsitrapo rehetra dia arahana ary tsy maintsy esorina ny fizahana ifotony mba handray anjara amin'ity programa ity amin'ny ezaka hiantohana ny fiarovana ireo mahazo.
Ahoana no fomba fangatahako amin'ny programa homebound?
Azafady mba fenoy ny fonosana fampiharana any an-trano ary araho ny torolalana amin'ny pejy 2.
Ampidino ny fonosana fampiharana homebound outreach fampiharana